Vivaldi, Opera ဖြစ်ချင်တဲ့ Metro interface | Linux မှ
Vivaldi, Metro interface နှင့်အတူ Opera ဖြစ်လိုသူ browser
1 Vivaldi ကဘာလဲ?
2 Vivaldi ကငါတို့ကိုဘာတွေယူဆောင်လာတာလဲ။
3 Vivaldi ရယူပါ
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကငါ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ် Vivaldi, ထိုကွာဟမှုကိုဖြည့်ဖို့ကြိုးစားနေမွေးဖွားသောအခြား browser ကို တေးသံစုံကဇါတ် သုံးစွဲသူများစွာကိုချန်ထားခဲ့သော်လည်း၊ Google က Chrome ကို အသစ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတူ။ တကယ်တော့ဒါက Google Chrome ပါ၊ ငါတို့သွားမယ်ဆိုရင် inbox ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိဘဲ log in လုပ်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
သို့သော်လည်းငါသည်ဤမျှတင်းကျပ်စွာဖြစ်ချင်ကြဘူး။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ ကျွန်တော်ဟာအဲဒါကိုအချိန်တိုလေးအတွင်းစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ အနည်းဆုံးတော့အမြင်အာရုံအနည်းငယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေပါပါတယ်။ သို့သော်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် developer များ (Opera ကိုတည်ထောင်သူတစ် ဦး) ၏အဆိုအရဤ browser ၏နောက်ကွယ်တွင်ဘာအကြောင်းရှိသည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
၁၉၉၄ တွင်ပရိုဂရမ်မာနှစ် ဦး သည်ဝဘ်ဘရောက်ဇာတွင်စတင်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူးမှာအလွန်လျင်မြန်သောဘရောက်ဇာကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်ပြီးကန့်သတ်ထားသောဟာ့ဒ်ဝဲများနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးသုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များနှင့်ဆန္ဒများကိုတစ် ဦး ချင်းဖြစ်ကြောင်းမှတ်သားထားရန်ဖြစ်သည်။ အော်ပရာမွေးဖွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းနည်းဆော့ဖ်ဝဲသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိလာသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုကြီးလာပြီးရပ်ရွာတစ်ခုဖန်တီးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်များနှင့်ရင်းနှီးသည်။ သုံးစွဲသူများထံကျွန်ုပ်တို့၏တုန့်ပြန်ချက်များနှင့်ကောင်းမွန်သောဘရောင်ဇာတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အကြံဥာဏ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ software ကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းနှင့်ထူးချွန်မှုအတွက်ကြိုးစားသည်။
2015 ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲပြောင်းလဲနိုင်ပေမယ့် browser ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်သက်တယ်။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာက၎င်းဟာသူ့ရဲ့ browser ကိုတည်ဆောက်ရာတွင်ကူညီပေးခဲ့သောသုံးစွဲသူများနှင့်မျှဝေသူများ၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုမထောက်ပံ့တော့ပါ။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနိဂုံးချုပ်အနေနဲ့လာပါတယ်။ browser အသစ်တစ်ခုလုပ်ရမယ်။ ငါတို့အဘို့အ browser တစ်ခုနှင့်ငါတို့၏မိတ်ဆွေများအတွက် browser ကို။ မြန်ဆန်သော browser တစ်ခုသာမကလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကြွယ်ဝသော browser လည်းအလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီးအသုံးပြုသူကို ဦး စားပေးသည်။ သင်တို့အတွက်လုပ်သောဘရောင်ဇာတစ်ခု။
ပထမဆုံးမြင်ရမယ့်အရာကတော့ Microsoft ရဲ့ Metro စတိုင်နှင့်အလွန်နီးကပ်သည်။ သူ၏အဓိကလက္ခဏာမှာ (တက်ကြွသော) tab များသည်ကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်နေသောဝက်ဘ်ဆိုက်၏အရောင်ကိုလက်ခံသည်။ တကယ်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အသေးစိတ်။
ရည်မှန်းချက်အနေဖြင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအရာကိုပြန်လည်ရယူရန်ဖြစ်သည် တေးသံစုံကဇါတ်, element များ၏ layout ကို, menus များနှင့်အပေါ်ကိုကျော်လွှားသည့်အခါ tabs ၏ preview ကိုအဖြစ်လျှောက်လွှာလိုဂိုအတွက်အဓိက menu ကိုအမွေဆက်ခံ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် tabs များကိုအရင်ကဲ့သို့အုပ်စုဖွဲ့နိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်လုပ်စရာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘေးဘက် panel ကအလုပ်လုပ်ပေမယ့် mail ကဖွံ့ဖြိုးဆဲပဲ။ ဒါပေမယ့်ကျန်အရာတွေကတော့ Bookmarks, Notes, Downloads, etc ။ panel ကိုလုံးဝဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပြီး Speed ​​Dial သည်ယခင်ပုံစံနှင့်ပိုတူသည်။
preference window တွင်လက်ရှိ Vivaldi version အတွက်မှန်ကန်သောရွေးချယ်စရာများရှိပြီး၊ differential details သေးငယ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Google Chrome ရဲ့ Preferences (Opera လက်ရှိလိုမျိုး) မှာဘာမှမကူးပါဘူး။ အချို့နေရာတွေမှာမူရင်းအရာတွေရှိပါတယ်။
ငါဒီဆောင်းပါးကို Vivaldi မှရေးရန်ကြိုးစားသော်လည်း browser တွင် WordPress နှင့်ပြသနာများရှိပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်ကြိုတင်မြင်ကွင်းမြင်သာအောင်ကြိုးစားသည့်အခါ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှကြိုတင်မြင်ကွင်းမဟုတ်ဘဲအခြားဘားတစ်ခုတွင်တင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါပြောခဲ့သလိုပဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့အစောပိုင်းအဆင့်မှာပဲရှိနေသေးတယ်၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုသတိပြုရမယ်။
Vivaldi ရရှိနိုင်ပါသည် သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ Debian နှင့် RedHat တို့အတွက်ပလက်ဖောင်းအားလုံး (Windows, Mac နှင့် Linux) အတွက်ဖြစ်သည်။ ArchLinux ကိုအသုံးပြုပါက၎င်းကို AUR မှတစ်ဆင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်၊ ငါမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ 64 bit အတွက်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Vivaldi, Metro interface နှင့်အတူ Opera ဖြစ်လိုသူ browser
အရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် webkit ကိုအင်ဂျင်တစ်ခုလိုငါမကြိုက်ဘူး၊ အဲဒါကလက်ဝါးကြီးအုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်၊
Webkit သည် Blink ဟုခေါ်သောဂူဂဲလ်ချိတ်ဆက်မှုဖြင့်ရိုက်နှက်နေပြီးဖြစ်သည် (ဗားရှင်း ၁၄ ထွက်ကတည်းက Opera လက်ရှိအသုံးပြုသည်)
blink သည် chrome အတွက်အကောင်းဆုံး webkit version တစ်ခုဖြစ်သည်။ နေဆဲမျက်တောင်ခတ် / webkit လက်ဝါးကြီးအုပ်
Jhoed သိုးထီး ဟုသူကပြောသည်
ယခုအချိန်အထိ Firefox သည် tab တစ်ခုချင်းစီကို Webkit ကဲ့သို့ Firefox <3 ကဲ့သို့ကွဲပြားသောလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်ခွဲခြားရန်မျှော်လင့်ထားပါသည်။
Jhoed Ram အားပြန်ပြောပါ
တကယ်တော့သူကပါဘူး။ https://wiki.mozilla.org/Electrolysis လက်ရှိဗားရှင်းတွင်၎င်းကိုစမ်းသပ်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကို activate လုပ်နိုင်မလားကျွန်ုပ်မသိပါ။
Gecko rendering engine သည် W3C မှအတည်ပြုထားသောစံနှုန်းများနှင့်အတူကွန်ရက်စာမျက်နှာများကိုပြသရန်လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့် Firefox သည် Blink သို့မဟုတ် Webkit သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမရှိသေးပါ။
ငါ link ကိုဖတ်ပါ, ဒါပေမယ့်ငါကပြောပါတယ်သောအရာကိုနားမလည်ခဲ့ဘူးထင်, ကြောင့်ငါကဖြစ်စဉ်ကိုတစ် ဦး တည်းသာသာအသုံးပြုသည်ဟုငါထင်သောကြောင့်,
Firefox အကြောင်းကျွန်တော်သဘောကျမိသည်။ ဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးရှိခြင်းဒါတော်တော်လေးမဟုတ်ပါဘူး!
ငါစမ်းကြည့်လိုက်ရင်နုပျိုနေရင်ကြည့်ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုလက်တင်အမေရိကစပိန်အတွက်အထောက်အပံ့ဖြင့်ထည့်သွင်းထားသော်လည်းဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲရန်ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါ။
KaOS အတွက်တော့ KCP ပေါ်မှာပါ
Spartan interface ကိုခရိုမီယမ်၏နောက်ထပ်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခု? ငါကောင်းကောင်း Opera Blink 27 (အနည်းဆုံး ၄ င်း၏အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုကိုဤဗားရှင်းတွင်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်အောင်တိုးမြှင့်ထားသည်) နှင့် ပို၍ ကောင်းအောင်ကပ်သည်။
ငါ Operiptilian ခံစားရတယ်၊ ဗစ်ဗလီကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကအစောပိုင်းအဆင့်မှာပဲရှိသေးတယ်။ သူဟာဂူဂဲလ်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းကဲ့သို့သောဂုဏ်ပုဒ်ဟောင်းနှင့်၎င်း၏စစ်ပွဲကဲ့သို့သောသဟဇာတရှိခြင်းမရှိသော်လည်းကောင်းမွန်သောမျက်နှာရှိသည်။ ဟုတ်သည်၊ အမြန်နှုန်းသည် leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ဖြစ်သည်။ Opera 11-12 ၏တူညီသော "feature-problem" သည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုဆွဲရန်အတွက်စာမျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုတင်ရန်မျှော်လင့်ထားသည့်ဖြစ်သည်
ယခုအဘို့ ... သူတို့ဂရုစိုက်ပါ
တစ်စုံတစ် ဦး က freebsd တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်ကိုသင်သိပါမည်လား။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
Plasma 5.2 ကိုရရှိနိုင်ပါပြီ၊ ဘာအသစ်လဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။